Perpetual bikradnimada Mary – 2kalluunka
Home / Church / Mary / Perpetual bikradnimada Mary
Maxaad Catholics rumaysan Maryan oo bikrad ah, marka Kitaabka Quduuska ah ayaa sheegay in Ciise lahaa, waana walaalo?
Markaasay, maxaa bikradnimadayda u Mary si muhiim ah in Catholics?
Jawaabtu waa mid fudud: Catholics rumaysan Maryan oo bikrad ah oo dhan ay nooshahay sababtoo ah waa run. Waa wax bara furtaa ku dhawaaqay Church Masiixa, “tiirka iyo aasaaska runta ah” (arki Bawlos Letter First in Timothy 3:15); ayaa shaaca ka qaaday iyada oo Dhaqan ahaan xurmaysan; iyo in agreeance la xurmaysan Kitaabka (arki Bawlos Letter Second in dadka Tesaloniika 2:15).
Sidaas, Catholics ay aaminsan yihiin in ay “Aniga iyo walaalaha Rabbiga” ku xusan Kitaabka Quduuska ah ahaayeen dhow xiriirka Ciise, laakiin aan walaalaha (sida aan kuu sharxi doonaa si faahfaahsan hoos ku qoran).
Ugu dambayn, iyo ugu weyn u, Mary ee Perpetual Bikranimadu waa lagama maarmaan ah in Masiixiyaddu sababtoo ah waxa ay xaqiijinayaan oo ku saabsan Ciise. Ugu dambayntii, Fikraddan waxa ku fiiqay in quduusnimada Masiixa iyo in la aqonsado ee dhalashada: fal Ilaah nin noqday.
Nebigii Ezekiel sheegay in amiirka “inay dibadda u baxaan, iyo ka dib markii uu ka baxay oo iridda la soo xidhaa” (arki Ezekiel 46:12), iyo Kaniisadda ayaa fahamsan inay tani tahay inay marjic u dhalashada Masiixa iyo bikrad ah nolosha oo dhan Mary ee (arki Saint Ambrose, Quduuskadhigidda of Virgin ah 8:52). Sidaas, waxaa la habboona in Mary hayn lahaa gabadh bikrad ah ka dib dhalashadii Ciise, sababtoo ah qofka uu yahay: Ilaah in foomka aadanaha!
Qorniin, mid ku dul story of Muuse iyo geedka gubanaya fikiri. Sida Muuse dhawaaday baadiyaha, Rabbiguna wuxuu ku yidhi, “Ha u soo dhowaanina; Siib Kabahaaga Adigu waxaad ka cagahaaga, waayo, meesha aad ku taagan tahay waa dhul quduus ah” (Baxniintii 3:5).
Sheekadan waxay naga caawinaysaa in ay fahmaan Mary ee Perpetual Bikranimadu laba siyaabood.
First, waxaan aragnaa in dhulka quduuska lagaga dhigay, maxaa yeelay, Rabbiga hortiisa ku soo degay ayaa waxaa. Waa in aynaan hilmaamin in isla Ilaah waxan, kuwaas oo u muuqday Muuse baadiyaha gubanaya, uurka lagu uuraysan Maryan.
Sidaas, waxaa kaliya la habboona in la yidhaahdo in ay, sida dhulka in quduuska ah Baxniintii, loo baahan yahay in la quduus lagaga dhigay, si gaar ah loo diyaariyey, in uu yahay, si ay u helaan oo ah Boqorka boqorrada iyo Sayidka sayidyada,.
Labaad, Aabbayaashow Church arkeen sanamkii kiciyo laftiisa–qabadsiiyaan baadiyaha ah, weli ma aydaan wada baabbi'in–sida tusaale ahaan ka mid ah Mary ee dhalmada adoon gabadh bikrad ah. Tusaale ahaan, oo noolaa qarnigii afraad, Gregory ee Nyssa qoray, “Maxaa shabbahayeen wakhtigaas ololkii geedka waxaa lagu si cad u muujiyey in qarsoodiga Virgin. … Sida buurta baadiyaha gubay laakiin ma basayn, si Virgin ka dhashay nuurka oo aan la kharribeen” (On Dhalashada Masiixa).
Aasaasiyan, Mary ee Perpetual Bikranimadu dhawaaqday inay dunida maxaa yeelay, Masiix ahaa si quduuska–Ilaah laftiisa–ma waxa ay habooneyn inuu la soo sameeyay uurka naag caadi ah; iyo, sidaas oo kale, dembilayaasha inay ka yimaadeen uurkii in isla isaga ka dib–maxalka si gaar ah loo diyaariyey inuu qaado Masiixa ku. Mar, tixgelin Ezekiel, “[Amiirkii] inay dibadda u baxaan, iyo ka dib markii uu ka baxay oo iridda la soo xidhaa.”
Bikradnimadayda u Mary ee waqtiga dhalashada, dadkii Rabbiga waa la tilmaamay nebi Isayos, kuwaas oo uu dhigayaa, “Bal eeg, bikrad ah baa uuraysan doonta oo wiil umuli, iyo yeedhi doonaan magiciisa Cimmaanuu'eel” (7:14; arki Matthew 1:23 iyo Luke 1:27). Isaiah, ka dib oo dhan, xaqiijinayaan gabadh bikrad ah ee uuraysanayna iyo in dhalista. Waxaa intaa dheer. Jawaab Mary ee, u Mikaa'iil ayaa ku dhawaaqay iyadu waxay uuraystaan ​​lahaa oo waxaad dhali doontaa wiil–“Sidee tani waxay noqon kartaa tan iyo markii aan ma oga nin?” (Luke 1:34)–si cad u muujinaysa in ay iyadu bikrad bay ahayd. Her cadaanyo dhif inay macno haddii kale.
Her gobolka iyo weligoodba virginal waxaa maldahan ee Song of Solomon, kaas oo sheegay, “Beerta A qufulan, Waa walaashay, aroosaddaydiiyey, il daboolay” (4:12).
Sidee baynu garan siin xaqiiqada ah in iyada iyo Yuusuf ayaa u doonanayd oo markii danbe guursaday? Waxaa jira dhaqan qadiimi ah oo haysata in Mary ayaa waxaa ka go'an in ay Rabbiga ayaa sida gabadh bikrad ah daahiriyeyna ka yaraantaadii; iyo in markay u timid da'da dhiibay Yuusuf, carmal ah oo wax badan ka weyn ayay u badan (cf. Protoevangelium ee James).
Fikradda ah aadaabta guurka ah xaaladaha qaarkood waa, dhab ahaan, Fikradda Kitaabka Qudduuska ah. Tusaale ahaan, Kitaabka koowaad ee Kings 1:4, King David qaadataa gabadh, Shag, in uu xaaskiisa ay isaga u daryeesho isagoo da 'weyn, laakiin fogaada ka xiriirka iyada oo la.
Waxaa intaa dheer, in uu Letter First Corinthians ee, Paul talinayaa xaalad Celibacy quduus ka dhigay ama sarbeebtaan oo had iyo goorba kuwa aqbali karo (arki 7:37-38).
Waxaa cad, iftiinka iyada ka soo wac inuu qaado Wiilka Ilaah, Mary ee guurka si Yuusuf waxaa la jiray ka fog caadiga ah. Waxa ahaa amarkii Ilaaha u ah daryeelka iyo ilaalinta oo ka mid ah Virgin iyo Wiilkeeda–si ay u dhawrto dhalashada ka qarsoon dunida oo muddo. “Bikrad ah ee Mary, iyada dhashaa, iyo sidoo kale dhimashada Rabbiga, ayaa ka qarsoon, kan madaxda dunida this,” qoray Ignatius ee Antiyokh, xer u ah Rasuul Yooxanaa, ee ku saabsan sanadka 107: “–saddex waxa Agtooda ah naadiye, laakiin ku sameeyey aamusnaan Ilaah” (Warqad ku Efesos 19:1).
In Matthew 1:19, Xurmaysan Kitaabka inoo sheegayaa Joseph ahaa “nin xaq ah.” Saasuuna, oo goortay maqleen Mary uuraysatay ilmo kale, inuu xalin in ay iyada iska fogeeya aamusnaan iyada badbaadisana ka badan tahay fulinta hoos Sharciga Muuse (sida Sharciga Kunoqoshadiisa 22:23-24).
Rabbigu wuxuu soo dhexgalay, In kastoo, sheegay iyada oo malag riyo, “Ha Maryan qaado ka baqin inaad naagtaada, waayo, waxa ay uuraysatay ayaa Ruuxa Quduuska ah; iyadu wiil baad dhali doontaa, oo waxaad u bixin doontaa magaca Ciise, waayo, dadkiisa ayuu dembiyadooda ka badbaadin doonaa” (Matthew 1:20).
Yuusuf ma qaaday erayadan loola jeedaa, In kastoo, in Mary ahaa in ay xaaskiisa ku dareen caadiga ah ee erayga. Sida Saint Ambrose ee Milan qoray,
“Midkoodna ma waxaa wax faraq ah in Qorniinku wuxuu leeyahay: 'Yuusuf wuxuu watay naagtiisii ​​iyo Masar tegey’ (Matt. 1:24; 2:14); wixii naag u doonanayd nin la siiyey magaca xaaskiisa. Waa wakhtiga guur bilaabmaa in ereyada guurka waxaa ka shaqeeya. Ma aha deflowering ka bikradnimadeedu ay ka dhigaya guurka, laakiin heshiiska guurka. Waa markii gabar ka aqbalo harqoodka in guurka bilaabmin, ma markii ay timaado in ninkeeda jir ahaan ogaan” (Quduuskadhigidda of Virgin iyo Perpetual Bikranimadu Maryan 6:41).
Taasi waxay dhashay Wiilka Ilaah sameeyey iyada xaaska ugu horreeyey ee Ruuxa Quduuska ah (per Luke 1:35); oo ahaa Yuusuf oo loo reebay sharciga ku hoos u leedahay xiriirka guurka la xaaska ah oo kale.
Maxay ku saabsan “Aniga iyo walaalaha Rabbiga?”
First, waa in lagu tilmaamay in ay jirto khatar ah in xiganaya Aayaadka Kitaabka ka mid ah macnaha guud ee dhan Kitaabka. Xaqiiqada ah in Ciise aamino Mary in Rasuul Yooxanaa, tusaale ahaan, waxaa daliil u xooggan uu ma lahayn walaalaha dhabta ah (arki John 19:27). Waayo, haddaad Mary lahaa carruurta kale, Ciise ma ka codsan qof ka baxsan qoyska si ay u daryeelaan iyada. (Dood hayno helo qaar ka mid ah kala jar ee wareegyada Evangelical yahay fikradda ah in Ciise ku Aaminto Mary in John sababtoo ah James oo Rabbiga ee kale “walaalayaalow” Masiixiyiintu ma aha weli. Laakiin taasi wax xuja ah xasiloonayn. Haddii ay taasi dhacdo waxay ahaayeen, mid ka fili lahayd Injiillada inay sharaxaad ka mid ah oo arrinkan khuseeya. Xaqiiqada ah in Ciise siinayaa Mary in John aan sharaxaad muujinaysaa Mary lahayn carruur kale.)
Sidee, ka dibna, baynu u fasiraan aayaadka sida Matthew 13:55, taas oo qof oo ku nool tacliiq dadkii badnaa, “Waa wiil tani ma nijaarka? Kanu sow ma aha Mary yaqaano inay hooyadiis iyo James, Yuusuf, Simoon iyo Yuudas walaalihiis? Ma walaalo oo aynu jaarka nahay ee ma uu?”
Xilkaasi waxa uu Catholic in kuwan “oo walaalo ah” iyo “Walaashiin” ahaayeen qaraabo dhow, sida adeer, laakiin aan walaalaha, raacsan caadadii hore Yuhuudda ugu yeeray mid ka mid ah ayaa ninkii xigaalka “walaalkiis” (per Genesis 13:8; 14:14; 29:15, et al.). Sida Pope John Paul Great qoray, “Waxaa loogu yeeri doonaa in jirin muddo gaar ah oo ka jira af Cibraaniga iyo Aramaatiga ah si ay u muujiyaan erayga "Adeerkay ', iyo in ereyga 'walaalkiis’ iyo "walaashiis’ Sidaas darteed waxaa ka mid ahaa darajo dhowr ah oo xiriir.”1
Waxaa intaa dheer, waxaa meelo kale shaaca ka qaaday in Matthew in “James iyo Joseph” run ahaantii waxay ahaayeen wiilashii ah Mary kala duwan, kuwaas oo leh inta kale ee haweenka wuxuu ag taagnaa cagta ee Cross iyo weheliyay Maryan tii reer Magdala ayaa xabaashii saaka Easter (27:55-56; 28:1).
Tani Maryantii kale waxaa si caadi ah la rumeysan yahay inay afadii Kaloobaas noqon, kuwaas oo laga yaabaa adeer u ah Ciise (arki John 19:25; eeg sidoo kale Eusebius, History of Church ee 3:11).2 Waxaa la sheegaya, Intaas waxaa sii dheer, in Rabbiga “walaalayaalow” yihiin meel Kitaabka loo yaqaan wiilashii Mary, sida, Ciise marar badan waxa loo yaqaan (arki Matthew 13:55; Mark 6:3, et al.).
Waxaa jira laba kale oo aayaadka Injiil in horjeeda Mary ee Perpetual Bikranimadu inta badan tixraacaan: Matthew 1:25 iyo Luke 2:7.
Matthew 1:25 ayaa sheegay in Yuusuf “ma uu iyada la waqti kasta ka hor waxay dhashay wiil.” Sida Ludwig Ott Caddaynay Qaamuus Catholic waxaydin, In kastoo, aayaddan “caddayn(s) in ilaa hal dhibic ka tirsa in waqtiga guurka ma dhammays, laakiinse ma aha xagga wax kasta in la dhammays ka dib” (Tan Books, 1960, p. 207). Ujeedada Matthew 1:25 waxay ahayd inay ansixiyaan in Ciise ma uu lahayn aabbihiis uu dumo, oo sida runta ah wuxuu ahaa Wiilkii Ilaah. Waxaa la ma loogu tala galay in soo jeedin wax ku saabsan Yuusuf iyo Maryan ayaa xiriir Ciise ka dib’ dhalashada. Ka fiirso Second Book of Samuel 6:23, kaas oo sheegay in Mary “ilmo ma in maalintii ay dhimatay.” Sida iska cad, taas macnaheedu ma aha ayay u dhacday, ilmo ka dib iyada dhimasho. In Matthew 28:20, Ciise uu ballan qaaday in la isaga raacaa noqon “in ku dhow ee ay da'doodu ka.” Mar, taas macnaheedu ma aha uu ka joogsan doonaan inay iyaga la durugsan xadka in.
In Luke 2:7, Ciise waxa loo yaqaan Mary ee “curadkiisii.” Si kastaba ha ahaatee, sida Pope John Paul sharaxay:
“Erayga "oo ahaa curadkii,’ macno ahaan waxaa loola jeedaa 'ilmo aan ka hormarey kale’ iyo, iniinahoodu ku dhex jiraan, ka dhigaysa tilmaan ah kuma sheegin jiritaanka carruurta kale. Waxaa intaa dheer, Evangelist ku nuuxnuuxsaday, sifo this Carruurta, tan iyo waajibaadka gaar ah ku habboon in sharciga Yuhuuddu lala dhalashada wiilkiisa curadka ah, madax banaan in hooyada ayaa laga yaabaa in la siiyo dhalashada carruurta kale. Oo sidaas waa wiil kasta oo keliya ahaa in ay daawada sababtoo ah waxa uu ahaa 'hore ku dhalay’ (cf. Luke 2:23)” (“Kaniisadda bandhigidda Mary sida 'Ever Virgin'”)
Michael O'Carroll, Intaas waxaa sii dheer, sheegay, “Looxii aasniinta Yuhuuddu ee Masar, shukaansi ka qarnigii ugu horreeyay, … caawisaa diidmo ka dhanka ah bikrad ah Joogta Mary ee ku salaysan St jawaabi. Luke ee isticmaalka ereyga 'curadkayga’ (prototokos) (2:7). Eray ma tilmaamayso carruurta kale waxa muujiyay isticmaalkeeda kiiskan si ay u sharxaan qof dumar ah oo ku dhintay ka dib dhalashada ilmaheedii ugu horreeyey dhalaysa, oo aan laga yaabaa cad ayaa dadka kale” (Theotokos: A fiqi encyclopedia oo ka mid ah barakaysan Virgin Mary, Michael quraaradle, 1982, p. 49).
Maxaad ka kaniisadeed dhahdaa?
Tan iyo markii labada dhinac ee khilaafka ka badan Mary ee Perpetual Bikranimadu, pro iyo con, sameeyo dood kitaabi si ay u taageeraan booska, sida aynu si loo ogaado waa kuwa xaq u? Yaa fasiri Kitaabka si sax ah, in sida ugu authentically rususha?
Mid ka mid ah habka ay u bixiyaan taageero waa in aad la tashato wuxuu qoray taariikheed hore kiristaanka ee, guud ahaan loo yaqaan qoraaladii ah aabbayaashii hore ee kaniisadda.
Clement ee Alexandria, tusaale ahaan, bilowgii qarnigii saddexaad qoray, “Hooyo Tani keligiis ahaa aan caano, maxaa yeelay, waxay keliya ma naagtiisa ahaan ah. Iyadu waa mar labada Virgin iyo Hooyada” (Baruhu wuxuu of the Children 1:6:42:1).
Clement ee ardayga, Source, ee labaatankii sano ee ugu horeysay ee qarnigii in, xaqiijiyay in Mary “lahayn ina kale laakiin Ciise” (Faallooyinka ku saabsan John 1:6). Dhanka kale, uu ku qoray, “Oo anna waxaan u maleynayaa in wada noolaanshaha iyo sababihii in Ciise yahay oo ah midhihii dhulka ugu horeysay oo nin oo reer nadiifiyo oo ka kooban in ka mid ah isdhawra, iyo Maryan oo haweenka ka mid ahaa; maxaa yeelay, waxay ka-midho hore ee bikradnimadooda lagu ma Dhawrsanayey inay sheegtaan kale oo iyada ka badan” (Faallooyinka Matthew 2:17).
Everton iyo Ammaantiisu way Xadgudbayaasha iyada u, Athanasius (d. 373) Mary tilmaamay sida “Ever-Virgin” (Doodda Against Arians ah 2:70).
In ku saabsan 375, Epiphanius ku dooday, “Waxaa jiray abid qof kasta oo taranta buuse joogaa, kan inuu la hadlo magaca Quduuska ah Mary, iyo su'aalo lagu waydiinayo, ma isla markiiba ku darto, 'Virgin?'” (Panarion 78:6).
“Hubaal,” qoray Pope Siricius in 392, “Annagu ma diidi karo in aad u maamuusi ahaa si fiican u cudur daar ku canaantay dhibcaha carruurta Mary ee, iyo in aadan haysan sabab wanaagsan in la yaabi ugu maleeyeen in dhalashada kale soo saari laga yaabaa markaan uurka ka mid ah virginal ka Masiix waxa uu ku dhashay sida jidhka” (Warqad ku Anysius, Bishop of Tesaloniika).
Ambrose uga hadashay in 396, “Iyada shabahaan, hooyooyinka quduuska, iyada oo keliya jeclahay Wiilka u soo bixiyey si weyn tusaale u ah maaddo Samo falku; maxaa yeelay, ma aad leedahay carruur macaan, mana Virgin doondoono gargaaridda isagoo si dhali doontaa wiil kale oo awood” (Waraaqaha 63:111).
Augustine ah Hippo (d. 430) xusay, “A uuraysanayna Virgin, dhalista ah Virgin, Virgin uur leh, Virgin ah boqortooyada bixiya, Joogta Virgin ah. Maxaad u yaabtay at this, Nin yahow? Waxaa la suurawdo Ilaah in la sidaas kaga dhashay, markuu deigned si ay u noqdaan nin” (Khudbadaha 186:1).
Pope Leo Great ku dhawaaqday in 449, “Waxa uu uuraysatay ayaa Ruuxa Quduuskaa ka gudahood uurka uu Virgin Hooyada. Waxay isaga soo bixiyey iyada oo aan khasaaro bikradnimadeedu, sidii ay isaga uuraysatay aan ay soo gaartay” (Tomé 28). Dhanka kale Pontiff qoray, “Wixii Virgin rimeen ah, dhaleen Virgin ah, oo waxay ku hadhay Virgin ah” (Khudbadiisa ku Iiddii dhalatay ah 22:2).
Saasuuna, aan heli sii taariikhiga ah ee waxbariddan ka sannadaha hore ee iimaanka hoos maanta.
Eeg “Kaniisadda bandhigidda Mary sida 'Ever Virgin;'” L'Osservatore Romano, Edition Weekly in English, September 4, 1996. ↩
“Dood hor, In kastoo,” fiirsanayo Karl Keating, “waa in James waa meelo kale (Mt 10:3) tilmaamay ina Alfayos, taas oo ka dhigan tahay in Mary, ku alla kii waxay ahayd, ahayd naagtii labada Kaloobaas iyo Alfayos. Mid ka mid ah xalka waa in ay laga dhintay hal mar, markaas diini ah. More badan tahay Alfayos, iyo Kaloobaas (Kaloobaas Giriigga) isku qof, tan iyo markii magaca Aramaatiga ah ee Alfayos la odhan karaa in Greek siyaabo kala duwan, sidoo kale sida Alfayos ama Kaloobaas. Waxaa kale oo macquul ah in Alfayos qaaday magac Giriig ah oo la mid ah in uu magaca Yuhuudda, Jid Saa'uul magaca Bawlos kaxeeyeen” (Soo galaya iyo raacnimada, Ignatius Press, 1988, p. 288). ↩